mairie-antananarivo – Tohin’ny fitsidihana nataon’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
Tohin’ny fitsidihana nataon’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
auteur 10 martsa 2017 Commentaires fermés
Araka ny fampanantenana nataon’ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana dia tonga nitsidika ireo traboina ny tenany androany maraina 10 Martsa 2017 nitohy hatramin’ny tolankandro. Fihaonana tamin’ny ireo tra-boina tao amin’ny ANS Ampefiloha,EPP Anosibe, sady tsy maharitra ny hijery fotsiny ny fony sy ny sainy amin’ny maha Reny azy.
Nanolotra ireo sakafo sy entana nampanantenainy, toy ny bodofotsy miisa 2000, koveta sy sceau 70 isa, menaka 10 baoritra, savony 32 baoritra, mofo 2000, kifafa 30 isa isaky ny Boriborintany, miampy rano fisotro Olympiko sy « Sur eau « ary bisiky ary vary; Izay no ho tsinjaraina azy rehetra.
Tsy vitan’izay ihany fa mbola nisy koa ireo toerana mbola tsy notsidihany ka tonga teny amin’ny boriborintany faharoa Rtoa Ben’ny Tanàna androany ihany. Epp Androndra izay nahitana traboina 312 sy tetsy amin’ny boriboritany faha 5 fokontany Morarano (traboina 354) sy Epp Soavimasoandro (traboina 292). Koa nomena Bodifotsy sy vary ,voamaina ihany koa izy ireo, akoatra, ny kifafa sy menaka, savony, koveta, sceau, rano, Bisky sns….
Marihana fa ny be antitra sy ny bevohoka ary ireo mitaiza kely no tena nomena ireo kohety sy bodofotsy.